FAQ | Su See Yar - Maynmar's first crowdfunding platform
Su See Yarနဲ့ပတ်သက်ပြီး
Q. Crowdfunding ဆိုတာဘာလဲ
A. လုပ်ငန်များ ၊ ပရောဂျက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးသော်လူများမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုရယူမယ့် ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်
Q. Su See Yar ဆိုတာဘာလဲ
A. မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပထမဆုံးသော Crowdfunding Platform တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ငွေကြေးအရင်းအနီးလိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းများ ပရောဂျက်များအတွက် ကူညီပေးနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Q. Su See Yarရဲ့အားသာချက်
A. ဘာသာစကား၃မျိုး(ဂျပန်ဘာသာ၊မြန်မာဘာသာ၊အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) : ပရောဂျက်တင်တဲ့ဘာသာစကားအရေအတွက်ကိုရွေးခြယ်ခြင်းဖြင့် ထောက်ပံ့စေချင်သော Donator Target ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
-မြန်ဆန်လှ တဲ့ငွေထည့်သွင်းမှု : ပရောဂျက်ပြီးတဲ့နောက် ရရှိလာတဲ့ငွေများကို လွှဲပေးမည့်ကာလမှာအများဆုံး၂ပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။
ပေးချေမှုအမျိုးအစား : VISA, Master, MPU
-Promotion server : Projectနဲ့ပတ်သက်ပြီး Promotion လုပ်လို့ရနိုင် (SNS, owned media ဖြစ်တဲ့ Myanmar Techpress မှာတင်လို့ရနိုင်)
-ဒီလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွင်းစျေးအတော်ဆုံးဖြစ်တယ် : သက်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း(၂၀၂၁ခုနှစ် ၃လကုန်ထိ)
တင်ပေးမယ့်ဝန်ဆောင်စျေးနှုန်းက 5%(လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွင် စျေးအတော်ဆုံးဖြစ်သည်။) (သက်သက်ဝန်ဆောင်ခ 5%)
-ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရဲ့သက်ရောက်မှု : တာဝန်ယူမည့်လူနှင့်
Q. ပရောဂျက်တင်ဖို့အတွက် တစ်ခုခုသော လက်မှတ်တို့ ဗဟုသုတတွေများလိုလား
A. ထွေထွေထူးထူးမရှိပါ။ စိတ်ပေါ့ပါးစွာ ပရောဂျက်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လာရောက်တိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးချင်ပါတယ်။
A. တစ်ခါတင်ထားတဲ့ ပရောဂျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်တင်ထားရန်ခက်ခဲမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှလွဲပြီး တစ်ခြားသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် ရက်ဆိုင်းခြင်းကိုမပြုလုပ်ပေးပါ။ တစ်ခုခုသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ရပ်ဆိုင်း ချင်ပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါ။
Q. Top pageမှာတင်ထားတဲ့ project ရဲ့ရွေးပုံရွေးနည်းက ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်နေလဲ
A. Project ရဲ့ငွေစုဆောင်းတဲ့နှုန်းတို့ social သို့မဟုတ် မီဒီယာတွေမှာ တင်နိုင်လောက်တဲ့အရည်အသွေးရှိပြီး Su See Yar ကသက်မှတ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းကိုခြေခံပြီး Top page မှာတင်ပါတယ်။ ပ‌ရောဂျက်အကုန်လုံးကို Top page မှာ တင်နိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါ။ နားလည်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Q. Reward ဆိုတာဘာလဲ
A. Crowdfunding project ကိုအားပေးသူတွေ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ လူများအတွက်ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်ပြန်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
A. ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် credit card ကတော့ VISA, Master ၂မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ၂မျိုးအပြင် တစ်ခြားသော ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ချင်ပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါ
Q. My page ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ရမလဲ
A. Su See Yar ကိုစတင်အသုံးပြုမည့်အခါမှာတော့ Email address သို့မဟုတ် Facebook Account ကနေ register လုပ်ပေးပါ
Q. ပရောဂျက်တင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ငွေးကြေးစနစ်ကဘယ်လိုရှိမလဲ?
A. တင်မည့်ဘာသာစကားအရေအတွက်နဲ့မဆိုင်ပဲ (၁ဘာသာ၊၂ဘာသာ၊၃ဘာသာ တစ်ခါတည်းတင်ပြီး)
စုစုပေါင်း 10% (လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု 5% + ပရောဂျက်တင်ပေးမည့်ဝန်ဆောင်မှု 5% ) ဆိုတဲ့ ဂျပန်စျေးအသက်သာဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစျေးနှုန်းဖြင့်
(ဒီစျေးနှုန်းနှင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် ၃လကုန်ထိ ပရောဂျက်တင်သူတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
ထိုကာလကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ တစ်ခြားသောကာလတွင်းပေးဆောင် ရမည့်ဝန်ဆောင်ခကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါမယ်။
1ဘာသာ - 15% (လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု 5% + ပရောဂျက်တင်ပေးမည့်ဝန်ဆောင်မှု 10% )
2ဘာသာ - 18% (လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု 5% + ပရောဂျက်တင်ပေးမည့်ဝန်ဆောင်မှု 13% )
3ဘာသာ - 20% (လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု 5% + ပရောဂျက်တင်ပေးမည့်ဝန်ဆောင်မှု 15% )
Q. ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့ ဘာတွေတင်ပြစရာလိုမလဲ
A. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့ project owner ကနေ ထောက်ပံ့ကြေးငွေကိုစုဖို့အတွက်က ၁၈နှစ်အထက်ဖြစ်ပြီး လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်(မိမိကိုင်ဆောင်နေသည့်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပါဝင်ပါမယ်။)၊ မိမိအမည်ပေါက်ဘဏ်အကောင့် နှင့် တရားဝင်ပြုလုပ်ထားသောမှတ်ပုံတင် (ကားလိုင်စင်၊ passport ၊ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်) သို့မဟုတ် ကျောင်းသားကဒ်ရှိတဲ့လူများပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီထောက်ခံချက်များအပြင် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှ လိုအပ်သည်ဟုယူဆတဲ့အခါ project owner နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခြားသော စာရွက်စာထမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
A. အောက်ပါ link ရဲ့ စုံစမ်းမှု page ကနေ လျှောက်ပေးပါ https://suseeyar.net/ja/inquiry
Q. My page ရဲ့ password ကိုမေ့သွားပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
A. My page အသစ်လုပ်မလား အရင် page ကိုချိတ်ဆက်ချင်ပါက အောက်ပါ link ကနေ စုံစမ်းမှု page ကနေ လျှောက်ပေးပါ https://suseeyar.net/ja/inquiry
A. All or nothing ပုံစံနဲ့ All in ပုံစံဆိုပြီးရှိပါတယ်။ မိမိနစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးခြယ်နိုင်ပါတယ်။
Q. All or Nothing ပုံစံဆိုတာလာလဲ
A. ရည်ရွယ်ထားသောငွေကြေးပမာဏထက်၁ကျပ်လောက်မလောက်ခဲ့လျှင် စုဆောင်းထားသည့်ငွေများအားလုံးကိုထည့်သွင်းပေးထားသည့် လူများထံ ပြန်လည်ပေးပို့မည့်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းထားသောငွေကြေးကျော်သွားတဲ့ပရောဂျက်ကပဲ အောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းကိုနှုတ်ပြီး ကျန်ငွေများကိုပရောဂျက်တင်သူထံပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Q. All in ပုံစံဆိုတာဘာလဲ
A. ရည်မှန်းထားသည့်ငွေကြေးကိုအောင်မြင်စွာစုနိုင်မစုနိုင်နဲ့မဆိုင်ပဲ သက်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းစုနိုင်တဲ့ငွေကြေးကို ပရောဂျက်တင်သူ ကိုပေးဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စုမိငွေကနေ ဝန်‌ဆောင်မှုနှုန်းကိုနှုတ်ပြီး ပရောဂျက်တင်သူကိုပေး‌ဆောင်ပါမယ်။
Q. "ပရောဂျက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသူတွေအတွက်ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာဖြစ်မလဲ?"
A. ပရောဂျက်တင်သူရဲ့တိုးတက်မှုများ၊ ပရောဂျက်တိုးတက်မှုကို အနီးကပ်ကြည့်နိုင်ပြီး အတူတကွ ရည်မှန်းချက်အတွက်လျှောက်လှမ်း နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပရောဂျပ်တင်သူကနေ ထောက်ပံ့အားပေးသူအတွက် ကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ reward ကိုလက်ခံရရှိနိုင်မှာပါ။